के हो Reddit's MOON क्रिप्टोकरrency र यसलाई रूपान्तरण कसरी गर्ने
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा, UNI टोकनहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई वितरित गरिएको थियो जब यो सबै सुरू भयो Uniswap फरकमा प्रोटोकलrent विगतमा तरीकाहरू र परिवर्तन गर्न नयाँ क्षमताको साथ जारी Reddit Moon (XMOON) मा DAI सिक्का।
को लागि जाँदा MOON लाई DAI रूपान्तरण प्रक्रिया, यो केहि अलि धेरै भ्रामक भएको छ। त्यसैले X सिर्जना गर्नु हाम्रो कर्तव्य होMOON واکथ्रु (गैर-अ speakers्ग्रेजी स्पिकरहरूका लागि गाईड) जुन यस प्रक्रिया मार्फत व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्दछ।
तर हामी सुरु गर्नु अघि हामी के बुझ्ने कोशिश गर्नेछौं MOON टोकनहरू हुन्। तर यदि तपाइँ पहिले नै यसको बारे मा सबै थाहा छ, तपाईं सीधा जान सक्नुहुनेछ सेक्सन "रूपान्तरण गर्न MOON लाई DAI"।
के - के हुन् MOON Reddits (XMOONs)?
एक नयाँ उपयोगिता को उपस्थिति
कसरि प्राप्त गर्ने MOON टोकनहरू?
के साथ गर्न सकिन्छ MOON टोकनहरू?
कसरी रूपान्तरण गर्ने MOON टोकनहरू क्रिप्टो / क्यासमा
चरण १: स्थानान्तरण MOON बाट Reddit भल्ट (Redditको लागि in-app वालेट MOON टोकन) तपाइँको मेटामस्क वालेटमा
चरण २: रूपान्तरण गर्नुहोस् MOON लाई xMoons अनि तेस्पछि DAI x लाईDAI
चरण:: एक्सचेन्ज एक्सMOON x को साथDAI
नयाँ अधिग्रहीत भएपछि म के गर्न सक्छु DAI?
मैले किन प्रयोग गर्नुपर्दछ MOON?
Reddit मे २०२० मा "भोल्ट" भनेर चिनिने एक नयाँ सुविधा प्रस्तुत गर्‍यो Reddit तिजोरी मूलत: एक हो Ethereum-बेस्ड क्रिप्टो वालेट, जुन प्रयोगकर्ताको इम्बेड गरिएको छ Reddit खाता र यसको उद्देश्य नयाँ उप भण्डार गर्नु होredditआधारित समुदाय टोकनहरू। सब भन्दा सहज उपreddit यस प्रयोगको साथ शुरू गर्नु थियो r/CryptoCurrency र त्यसैले पहिलो Reddit समुदाय टोकन यस उप को लागी शुरू गरीएको थियोreddit as r/CryptoCurrency MOONS.
यो नयाँ टोकन, को रूपमा चिनिन्छ MOONको पछिल्लो सहभागीहरूलाई वितरण गरिएको थियो r/CryptoCurrency उपreddit प्रत्येक weeks हप्ता यस अनुसार Reddit "MOON टोकन तपाईको योगदानको लागि पुरस्कृत हुने नयाँ तरीका हुन् r/CryptoCurrency. MOONs नयाँ खण्डमा अनुरोध गर्न सकिन्छ Vault को वॉल्ट भनिन्छ Reddit आईओएस वा एन्ड्रोइड को लागी अनुप्रयोग! एकचोटि अनुरोध गरेपछि, तिनीहरू हाम्रो उप हुन्छन्reddit सम्पत्ति यसबाहेक, तिनीहरू हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, प्रयोग र खर्च गर्न सकिन्छ r/CryptoCurrency.
मा डिजाइन गरिएको Ethereumको रिन्कबी टेस्टनेट, यो व्यापार गर्न सुरुमा सम्भव थिएन MOON माध्यमिक बजारमा, जसले मूल्य सेट गर्न गाह्रो बनायो। तर चाँडै नै प्रयोगकर्ताहरू एक कार्यवाहीको साथ आए, जुन हामी यस गहन लेखमा कुरा गर्नेछौं।
सेप्टेम्बर २ On मा, "नयाँ नयाँ" शीर्षकको थ्रेड Moons सुविधा - सिक्कामा रूपान्तरण गर्नुहोस्! " मा सिर्जना गरिएको थियो r/CryptoCurrency उपreddit र कसरी रूपान्तरण गर्ने वर्णन गर्दछ MOON लाई Reddit टोकन। Reddit टोकन पोष्ट र टिप्पणी असाइन गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू नयाँ छैनन्, किनकि प्रयोगकर्ताहरूले यी खरीद गर्न सकेका छन् Reddit टोकन केही समयको लागि फिएट मनी प्रयोग गर्दै। समयको।
निलो बाहिर, MOON उपयोगिता आइपुगेको छ। यो रूपान्तरण को लागी अनुमति छ MOON Reddit एक वास्तविक मान सिक्का मा सिक्का। त्यसकारण यो आश्चर्यजनक छैन कि पैसा बजार सिर्जना गरिएको छ जुन तपाईंलाई रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ MOON, जो एक टेस्टनेट क्रिप्टोकर होrenमेननेट क्रिप्टोकरमा साइrencies जसको वास्तविक मूल्य हुन्छ।
हामीले कन्भर्टर गर्ने तरिका पत्ता लगाउनु भन्दा पहिले MOON टोकन DAIआउनुहोस्, हामी वास्तवमै कसरी प्राप्त हुन्छौं बुझौं MOON। माथि उल्लेख गरिए अनुसार टोकनहरु मासिक वितरण गरिन्छ व्यक्तिगत योगदान (टिप्पणी, पोष्ट, आदि) मा आधारित छ कि व्यक्ति बनाउँछ r/CryptoCurrency. Reddit कर्मले व्यक्तिको योगदान नाप्नको लागि आधार प्रदान गर्दछ, तर अन्तिम निर्णय समुदायमा हुन्छ।
शुरुमा, million करोड MOON टोकनहरू सबमा वितरण गरिएको छreddit मिति मा आधारित छ Reddit कर्मा प्रत्येक पछिल्लो महिना वितरित रकम million लाखबाट सुरु हुनेछ र प्रत्येक चक्रको साथ २.%% ले घटाउनेछ, ताकि कुल संख्या MOON समयको साथ वितरित अधिकतम २ 250० लाख को सीमा मा पुग्छ।
एक पटक Redditहामी प्राप्त गर्दछौं MOON टोकनहरू, तीनिहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्:
यसमा विशेष सदस्यता खरीद गर्नुहोस् r/CryptoCurrency उपreddit, जसको लागत १,००० छ MOON प्रति महिना। लाभहरूमा विशेष वफादारी ब्याज र एनिमेटेड gifs र emojis प्रयोग गरेर जवाफ दिन सक्ने क्षमता, अन्य चीजहरू समावेश गर्दछ।
ब्याज र विशेष पुरस्कार खरीद गर्नुहोस्
सब सुधार गर्न सर्वेक्षण लिनुहोस्reddit, टोकन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो जीवनमा कमाएको राशिबाट भारित Reddit खाता।
अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्री सिफारिश गर्नुहोस्
एक पटक प्रयोगकर्ताहरू खर्च गर्छन् MOONs on Reddit, प्रोटोकलले तिनीहरूलाई संचलनबाट हटाउँछ। यसको मतलब त्यो हो MOON प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध समयसँगै घट्नुपर्दछ, बाँकी टोकनको मान बढाउँदै, आशा राख्नु पर्छ।
तथापि, सबै को आधा MOON प्रत्येक महिना जलेको टोकनहरू अर्को महिना अर्थतन्त्रमा पुन: प्रस्तुत हुनेछ, त्यहाँ सँधै नयाँ रहनेछ भनेर सुनिश्चित गर्दै MOON २ million० मिलियन टोकनहरू जारी भइसकेपछि पनि वितरण गर्न।
यो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि, यहाँ हाम्रो मुख्य चीजहरू छन् जुन तपाईंलाई अनुसन्धानको खोजीमा आधारित छ र एक साझा स्पष्टीकरणमा आधारित छ Reddit:
एक मेटामस्क खाता
शुल्कहरू कभर गर्न ETH ब्यालेन्स
Rinkeby मा केहि रिन्कबी ईथर (करहरू कभर गर्न)
DeFi टोकन, DAI (एक्स मा रूपान्तरण गर्नDAI शुल्क कवर गर्न)
यो गर्नका लागि तपाईले पुन: प्राप्ति वाक्यांश प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ Reddit भोल्ट (मा उपलब्ध Reddit मोबाइल अनुप्रयोग। तपाइँको वाक्यांशको साथ तपाइँको खाता रिसेट गर्न सेटअपको बखत मेटामास्कमा "पुनःप्राप्ति वालेट" चयन गर्नुहोस्।
वैकल्पिक रूपमा, तपाईं मा सबमिट बटन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ Reddit भोल्ट अनुप्रयोग, त्यसपछि अनुप्रयोगबाट टोकनहरू तपाईंकोमा पठाउनुहोस् Ethereum मेटामास्कमा ठेगाना। यो विकल्प हामीले प्रयोग गर्‍यौं।
एक पटक लेनदेन पूर्ण भयो, मेटाटास्क अनुप्रयोगबाट नेटवर्कहरू स्विच गर्नुहोस् "Ethereum नेटवर्क "" Rinkeby टेस्टनेट "लाई।
नोट गर्नुहोस् कि तपाईको टोकनहरू यस बिन्दुमा तुरून्त देखिने छैनन्, तपाईले अझै पनि थप्न आवश्यक छ MOON मेटामास्कमा अनुकूलन टोकन विकल्प प्रयोग गर्दै।
एकचोटि तपाईंले यो प्रविष्ट गर्नुभयो, तपाईं अर्को चरणमा जान सक्नुहुन्छ जुन रूपान्तरण समावेश गर्दछ MOON X लाईMOON.
यो स्थानान्तरण पूरा गर्न तपाईलाई केहि रिन्कबी ईथरको शुल्क चाहिन्छ। Https://faucet.rinkeby.io/ वा https://rinkeby.faucet.epirus.io/ मा नल पूरा गरेर तपाईं नि: शुल्क रिन्कबी ईथर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि यी कुनै पनि कामहरू छैनन् भने, रिन्न्बी ETH समात्ने कोहीलाई फेला पार्नुहोस् र तपाईंलाई केही पठाउनको लागि भन्नुहोस्। हाम्रो मामलामा, हामी उदारसम्म पुग्यौं Redditवा पहिलो गाइडमा हामी पढ्छौं Reddit कसरी व्यापार गर्ने मा Reddit टोकन
सँग मेटामस्क ठेगाना MOON (तपाईंसँग पहिले नै यो छ)
रिन्कबी ईथर (तपाईंसँग नलबाट केही छ)
DAI (तपाईंलाई x चाहिन्छDAI एक्स एक्सचेन्जको लागि लेनदेन शुल्क तिर्नMOON x को लागीDAI)
त्यसो गर्न, किन्नुहोस् DAI Binance वा Coinbase बाट र तपाईंको MetaMask ETH ठेगानामा पठाउनुहोस्। एकचोटी तपाईंले त्यो गरिसकेपछि, http: // मा जानुहोस्।moon-exchange.herokuapp.com/ र तपाईंको मेटामास्क वालेटलाई लिंक गर्नुहोस्। यो विकल्प साइटको गृह पृष्ठमा उपलब्ध छ यदि तपाईं यसलाई पहिलो पटक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने
त्यसो भए, विनिमय इन्टरफेस प्रयोग गर्नुहोस् र एक्सचेन्ज चयन गर्नुहोस् MOON X को लागीMOON। यस बिन्दुमा केहि गलत हुन सक्छ र तपाइँले यो हामीलाई जस्तो गर्नुभयो त्रुटि सन्देश प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नडराउनुहोस्! यसले हामीलाई रूपान्तरण गर्न शाब्दिक २० मिनेट लियो MOON X लाईMOON र हाम्रो वालेटमा पहिलो पटक पुष्टि गर्नुहोस्।
केही प्रयोगकर्ताहरूको लागि, तथापि, लेनदेन तत्काल छ र तपाईं यो देख्न सक्नुहुनेछ XMOONs आफ्नो मा dashMetaMask मा लेनदेन पुष्टि को २ मिनेट भित्र बोर्ड र एक्सचेन्ज प्रक्रिया पूरा हुन को लागी प्रतिक्षा गर्दै।
जे भए पनि तपाईसँग X हुनुपर्दछMOON को राशि बराबर टोकन MOON तपाईं मा उपलब्ध रूपान्तरण आफ्नो मा dashकेही मिनेट पछि बोर्ड।
त्यसो भए, रूपान्तरण गर्नुहोस् DAI x लाईDAI उही “एक्सचेन्ज इन्टरफेस” को प्रयोग गरेर। मान प्रविष्ट गरेपछि पृष्ठको तल स्व्याप बटन क्लिक गर्नुहोस्। २ DAI सम्पूर्ण लेनदेन को लागी पर्याप्त हुनु पर्छ।
नोट: माथिको विकल्प स्वाप गर्नका लागि Dai X को लागीdai HTTP: // माmoon-exchange.herokuapp.com/ अधिक उपलब्ध छैन। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं https: // प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।dai-ब्रिज.पोआ.नेटवर्क / विनिमय गर्न DAI X को साथDAI। न्यूनतम १० DAI रूपान्तरणको लागि आवश्यक छ, यद्यपि सबै प्रयोग हुने छैन।
तपाईं एक पटक XMOONs तपाईको मा देखिन्छ dashबोर्ड र xDAI, तपाईंले यी साटासाट गर्नु पर्छ XMOONs x को साथDAI काँटा मार्फत Uniswap, honeyswap विनिमय (https://honeyswap.org/)।
माथिको यूआरएल हेर्नुहोस् र तपाईंको मेटामस्क वालेट लिंक गर्नुहोस्।
अर्को, X चयन गर्नुहोस्MOON टोकनबाट एक्सचेन्ज र त्यसपछि xDAI टोकनमा प्राप्त गर्नका लागि। लेनदेन निश्चित गर्नुहोस् र केहि सेकेन्ड प्रतिक्षा गर्नुहोस्। यदि लेनदेन असफल भयो, कृपया फेरि प्रयास गर्नुहोस् किनकि यस्तो देखिन्छ कि तरलता अझै X को लागी पिल गर्दै छMOON / एक्सDAI Honeyswap मा पूल।
एक पटक व्यापार पूर्ण भएपछि, https: // मा फिर्ता जानुहोस्।dai-bridge.poa.network/ र ट्रेड एक्सDAI संग DAI। यहाँ छ! तपाईंको पठाउनुहोस् DAI Binance वा Coinbase मा र यसलाई BTC वा fiat cur को लागि बेच्नुहोस्rency
तपाइँ तपाइँको मा ब्याज कमाउन सक्नुहुन्छ DAI डेफी प्रोटोकल प्रयोग गर्दै। तपाईं आफ्नो व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ DAI कुनै पनि cryptocur माrency तपाइँ कुनै पनि विनिमय को उपयोग गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं आफ्नो नगद पनि सक्नुहुन्छ DAI यो फिएट पैसा रूपान्तरण गरेर तपाईंको देश मा एक समर्पित सेवा प्रदायक को उपयोग गरेर।
हामी पूर्ण रूपमा बुझ्दछौं कि रूपान्तरण प्रक्रिया कुनै पनि हिसाबले सहज छैन। सफलतापूर्वक रूपान्तरण गर्न त्यहाँ धेरै चरणहरू सामेल छन् MOON एक मेननेट कर् गर्नrency जस्तै DAI। क्रिप्टोग्राफीमा टेक्नोलोजिकल प्रगतिहरूको अत्यन्त तेज गतिलाई ध्यानमा राख्दै, क्रिप्टोग्राफी एकदम चाँडै अप्रचलित हुन सक्छ। यस बीचमा, म आशा गर्दछु कि तपाईंले यो उपयोगी भएको पाउनुभयो।
तपाईं चासो हुन सक्नुहुनेछ MOON यदि तपाइँ यो कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न चाहानुहुन्छ भने r/CryptoCurrency उपreddit वा पहिले नै त्यसो गर्दै छन्। यदि तपाईं पहिले नै सक्रिय सामग्री सिर्जनाकर्ता हुनुहुन्छ r/CryptoCurrency, तपाइँ दाबी गर्न भल्ट सिर्जना गर्ने बारे विचार गर्न सक्नुहुन्छ MOON टोकनहरू तपाईले आजसम्म कमाउनुभएको छ।
सक्रिय उपयोगकर्ताहरूले पनि खरीद गर्न सक्दछन् MOON उनीहरूको मनपर्ने सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको बारेमा टिप गर्न। अन्तमा, तपाईं एक लगानीकर्ता हुन सक्नुहुन्छ जुन लोकप्रिय समुदायले व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको क्रिप्टो सम्पत्ति स्वामित्वको दीर्घकालीन अवसरमा विश्वास गर्दछ। Reddit.